Galaxy C5 iyo C7, oo si shaki leh ula mid ah iPhone | Wararka IPhone
Samsung Galaxy C5 iyo C7 wax ma ku xasuusinayaan?
Toddobaadkan waxaan kaaga sheegnay Xiaomi, Mid ka mid ah shirkadaha ugu xaasidsan ayaa xilligan ku soo toosaysa waaxda tikniyoolajiyadda taasna waxay go’aansatay inay iyadu iskeed u gasho aag kale oo iyaga ka shisheeya ilaa hadda: oo ah diyaaradaha drones-ka. Hadda waa waqtigii la sheegi lahaa Samsung, in kasta oo aan loo dhigmin Xiaomi,Labada shirkadood ee Aasiyaanka ahi waxay umuuqdaan inay leeyihiin dhadhan caadi ah: oo ay dhiirigalinayaan fikradaha shirkadaha kale.
Diyaaradda Drone-ka ee ay soo saartay Xiaomi wax badan ayey ka ballan qaadaysaa xagga tayada-tayada, laakiin waxay inyar na xusuusineysaa muuqaal ahaan waxyaabaha kale ee jira ee tartanka. Waxaa la mid ah Galaxy C5 iyo C7 cusub (iyo maya, annaguna sidoo kale ma nihin fanboys). Qof kasta oo ujeeddo muhiim ah u leh taleefannada casriga ah ee cusub ee Kuuriya ay noo keeneen, wuxuu ku arki doonaa jalleec in u ekaanta ay u egyihiin astaanta Apple ay ka macquulsan tahay.
Ficil ahaan milimitir kasta oo naqshaddiisa ka mid ah wuxuu si toos ah noogu soo tebinayaa iPhones-ka aan hadda ka heli karno suuqa: laga bilaabo dhinacyada gadaasha oo ku kala duwan midabka guryaha ilaa qaybinta badhamada jirka, maraya salka qalabka (in kasta oo Samsung wali ku guuldareysato inay si fiican u dhex dhigto dhammaan walxaha aan ku helno sidan). Waxay u badan tahay in, in meel fog laga arkay, in ka badan hal uusan kala sooci karin taleefannada casriga ah iyo midka tartankiisa tooska ah.
Sida iska cad, iyagu boqolkiiba boqol isku mid ma aha. Dabcan, waxaa jira qodobo aysan iskumid ahayn, laakiin waa kuwa uguyar. Ma iga qaado hurdadayda halka, waqtiga taleefannada gacanta ee ku jira Android gudaha ay ka muuqdaan xitaa dhagxaanta hoostooda, laba ka mid ah ayaa midba midka kale u eg. Maxaa aniga i khuseeya, si kastaba ha noqotee, waa firfircoonida "hal-abuurnimada ugu yar" taas oo shirkadaha qaarkood ay umuuqdaan inay naftooda gelinayaan iyo, kaaga sii daran, meesha ay umuuqdaan inay ku raaxeysanayaan. Haddii aad sameysid qalab si qumman u shaqeynaya oo leh qeexitaanno gudaha ah oo la aqbali karo, sida C5 iyo C7, ugu yaraan isku day inaadan aad u dareemin wax badan oo meesha aad ka arki karto ka timid, taas oo ah naqshadeynta dibedda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Samsung Galaxy C5 iyo C7 wax ma ku xasuusinayaan?
Waad khaldan tahay maxaa yeelay waxaa loogu yeeraa c5 iyo c7 ee Apple xaraf kasta macno ayuu ku leeyahay Samsung sidoo kale (C) waxaa loogu tala galay COPY JAJAJAJAAJ
Victor Garcia Lara dijo
Hagaag, waxaan kaliya u iibsaday xaaskeyga Samsung galaxy A5 2016 xaaskeyga waana nuqul guud oo ah IPhone 6s
Jawaab ku sii Víctor García Lara
1.-Adigu dan kama lihid, laakiin qor maqaal ku saabsan dabeecadda shakhsiga ah ee naqshadeynta.
2.-Jooji aragtida cawska indhaha kuwa kale, waa inaad ka walwashaa inaad siiso shirkaddaada fikradaha dib u soo ifbaxaya, maxaa yeelay maalmaheeda ugu dambeeya ... in ka badan hal-abuurnimo la'aan, waxay u baahan yihiin wax cusub oo loogu talagalay qorayaasha iyo fanboys sidaada oo kale ah mar labaad ku ammaani alaabadooda. Oo jooji fiirinta waxa dadka kale sameeyaan.
SAAXIIBTII UGU fiicnayd MA AAD SHEEGI KARTID, WAAD KU XAQSAN TAHAY TOOOOOODOOO. Boggan wuxuu horey u nuugay maqaallo badan oo Samsung ah
Kaliya kuma aqbali karo, Jonatan, laakiin, kadib markii aan isticmaalay wax soo saarka Apple muddo ka badan 20 sano, waxaan mar horeba ku daalay xaqiiqda ah in waxa aan caddayn ay tahay astaanta oo aysan ahayn tayada sheyga ay i iibinayaan.
Samsung way nuqulan kartaa, laakiin alaabteeda maanta waa tayo aad u wanaagsan oo kala bar qiimaha Apple.
Ku jawaab luisla
Shirkaddaadu waxay leedahay mid iftiiminaya halkaas ... Haa, dhammaanteen waxaan nahay saamileyaal ... Tag dhim bil ah inaad nacayb nacayb u jirto kiiloomitir aan caadi ahayn
Oh wiil! Xoogaa isdaji oo ha ixtiraamin kuwa sidaada ka fikir duwan.
"Qaybinta badhannada jirka"
Qof ayaa aaminsan Kickstarter (ama wax badan oo dad ah)
olole si loo helo tifaftireyaasha qaar muraayadaha xD
Waad ka yara diidi kartaa waxa aad dhahdo ... waxaan ula jeedaa in aan idhaahdo Samsung ayaa ka maqan hal-abuurnimo markii Apple ku jirtay iphone kii ugu dambeeyay ee ay soo bandhigtay ay sameysay isla iPhone 5 rinji .... ma waxaad ka hadlaysaa nuqul? Markay Apple dhawr sano gudahood soo bandhigayso shaashadaha geesaha ee iPhoncitos ay ka soo iibsatay sooyaalkeedii «Samsung» waxaan ula jeedaa, maxaan ka hadlaynaa ??? Ma dhihi kartid laakiin waxaad isku dayeysaa inaad dhahdo iyagu waa asal ahaan ha ha ha markii ay ka yimaadeen Apple dhowr sano ka hor waxay dhaheen muhiim maahan in la haysto xarago iyo in qalabkoodu had iyo jeer ka hooseeyo 5 inji ... Waan ogahay in Tim cook uusan waligiis ixtiraameynin… Iphone 6 iyo 6s oo lagu daray isagoo leh shaashado inch oo ka yar kuwa kale ee casriga ah wali wey weynyihiin bigger. iyo shay kale uma socdo wax nooc ah laakiin naqshadda iphone-ka waxaa soo guuriyey noocyada farsamada ee X artas. .. isla meel kaamarada ah ... laakiin halkaas waligaa waxba kama odhan doontid ... inta kale ha u sii wadaan inay wax cusub ka dhex abuuraan bartamahooda dhexdooda ... taasna maahan sababta aad ugu bartay inaad dadka ka dalbatid gacan iyo a lug X a 16gb iphone maxaa ceeb ah…. (Shirkada tikniyoolajiyadda runta ah waa mida og inay tahay in tikniyoolajiyaddu ay hesho qof walba). PUCHA WAXA AAN KU QABNAY INAAD KA YARATO SHAQADA SHAQADA
U ooya golayaasha lagdroid
Francisco coronado Fernandez dijo
Si kafiican ayaa looga jawaabaa wax caqli gal ah ... laakiin haye, maxaa kale oo aad baran doontaa sida looga jawaabo, hadii Apple uusan aheyn inuu isdifaaco
Ku jawaab Francisco coronado fernandez
Natu Pitetti dijo
Xaqiiqdii waad saxan tahay laakiin boggaan taageerayaasha ah aqbali maayaan runta haha, mid kastaa wuxuu oggol yahay naftiisa in loo xado sida uu rabo.
Jawaab Natu Pitetti
Inaad yeelato ?? Ka hadal hal-abuurnimo ??
Markii ay Apple dib u soo bandhigtay isla iPhone 5 nashqad oo ku taal iPhone SE.
Waxay ka hadlaysaa asalka markii Apple ay leedahay wax walba oo qorsheynaya inay ku dhejiso isla shaashadda galax s7 taleefannadooda iphone si dhakhso leh, iyagoo ka iibsanaya sooyaalkeeda gaarka ah.
Wuxuu ka hadlayaa sida ay shirkadaha u noqon lahaayeen kuwa u gaar ah abuurista teknolojiyadda markii Apple muddo aan fogayn ay sheegtay inay la sii joogi doonto shaashadaha ka hooseeya 5 inji ... oo waxaan ogahay inay hadda samaynayaan iphone 5.5-inji ah macnaheedu waa in shaashado ka yar kuwa kale ee casriga ahi ka weyn yihiin jirka. … Marka maxaan ka hadlaynaa ???
Better dhaleeceynta in Apple ay ku soo dallajiso gacan iyo lug 16 GB iPhone GB ah. oo ha u ogolaadaan shirkadaha inay sii wadaan sameynta taleefannada casriga ah ee 'MID-RANGE' laakiin tan iyo markii Apple uusan ogeyn taas ...
Ma difaaco shirkad laakiin shirkadda tiknoolajiyadda runta ah waa tan og inay tignoolajiyadeeda tahay inay qof walba heli karto
Blah blah blah kulligiin waad tagtaan oo waxay leeyihiin xoogaa dabaylo dabayl wata !!
Qof kasta ayaa nuqul tufaaxa ah waa xaqiiqo iyo dhibic. Tufaaxuna wuxuu sii wadaa inuu u iibiyo sida rootiga rootiga oo saamiyadu mar kale kor u kaceen. Iyo lagdroid-yada jilicsan ee isku dayaya inay nuqul ka sameeyaan 3D taabashada hahahaha waana u qalmaan. Oo markay soo saaraan iphone-ka cusub dhammaantood si ay u nuquliyaan !!! Qof kastaa wuxuu raacayaa hoggaamiyaha hal-abuurnimada iyo naqshadeynta. C5, nuqul c hehehe
Ilaa intaan ogahay tirakoobku wuxuu leeyahay wax ka soo horjeedka, iibku hoos ayuu u sii dhacayaa waana sababta ay saamilayda waaweyn u macsalaameeyeen tufaaxa, marka lagu daro, taabashada 3d maaha mid ka timid tufaax, waxay ka timid Huawei. Iyagu waxay ahaayeen kuwa ugu horreeya ee soo saara iyaga kahor Apple. .. ilaa iyo intaan ogahay shirkadaha waaweyn ee teknolojiyada wali kamaydafin taabashada 3d cidna wali ..
Hello Francisco. Hoosaad: Huawei ayaa sii daayay maxaa Apple waxay soo saartay sanad ka hor Apple Watch, markaa ma ahayn kii ugu horreeyay. Waxyaabaha kale maya, laakiin shaashadda ugu horreysa ee noocan ah waxay ku jirtay Apple Watch iyo Force Touch. Huawei wuxuu bilaabay isla sanad kadib, Apple-na waxay soo saartay jiilkii labaad ee bandhigyo cadaadis-ogaansho ah usbuuc kadib markii ay Huawei soo bandhigtay jiilkeedii koowaad.
1:08 - Waxaan ka hadlay Apple Watch oo waxaan sheegay Force Touch. Waa Sebtember 2014 https://www.youtube.com/watch?v=OD9ZQ9WylRM
Huawei wuxuu soo bandhigayaa Mate S oo leh Force Touch bishii Sebtember 2015 https://www.actualidadiphone.com/huawei-copia-force-touch-de-apple-en-su-nuevo-mate-s/
Dhinaca kale, haddii 3D Touch ay bixiso fursado yar, Huawei wali waxay bixisaa wax ka yar maxaa yeelay midkoodna ma maleynaynin ama horumariyayaashu weli kuma hirgelin karaan Android.
Taabashada 3D waa qabow, wax kasta oo kale waa dibin daabyo
10 sano ka hor qofku wuxuu ku arkay noocyo kala duwan sida Motorola, Nokia, Samsung, Arcatel, iwm. Waxaa jiray taleefannada gacanta oo dabool leh, oo aan lahayn furka, oo dhinac u siqaadaya, kuwaas oo waaweyn, yaryar, dhexdhexaad ah, taabanaya, oo leh kumbuyuutar, iskudhafyo, iwm ... Waxaa jiray taleefannada gacanta ee dhadhanka oo dhan. Hadda taleefannada gacanta oo dhami waa isku mid; la mid ah iPhones.
Ku jawaab Evan
Waxaan u maleynayaa inay tahay talaabo caqli gal ah oo Samsung ay ku qaawisay iPhones. Waxaan u maleynayaa in taleefannada Kuuriya ay noqon doonaan kuwo aad uga jaban, sidaas darteed iibsadaha Apple ee iman kara wuxuu aad uga careysan yahay in taleefankooda gaarka ah lagu qaldo mid ka jaban, oo wuxuu ka fekerayaa laba jeer inuu ku bixiyo dhammaan lacagtaas lacag la'aan. Ilaa aad ka faa'iideysaneyso awooddeeda farsamo ee cajiibka ah haddii ay dhacdo inaadan laba jeer ka fikiri doonin, inkasta oo ay noqon doonto tirada ugu yar ee iibsadayaasha iman kara.
Hagaag, waxaan kudaadiyey xoogaa diirka alaabada kala duwan ee tufaaxa waana ay uqalmayaan, midkasta oo euro ah oo la maalgashaday.
Khibrada adeegsiga ayaa ah waxa ugu muhiimsan, kunka udub dhexaad iyo gazillion gigs ee wan ayaa i xiiqay. Muhiimaddu waa inay shaqeeyaan oo ay adiga kuu shaqeeyaan markii aad u baahato ugu badan. Markaad isku aragtid dal shisheeye, goor barqo ah, meel dhexe ah, waxaan arki doonnaa haddii diirkaga iyo wanku ku caawiyaan; ama haddii, liddi ku ah, meertada iyo 3g ay shaqayso adoon sii dheerayn oo khariidadu ay kugu hagto meeshaad u socoto si nabadgelyo ah inkasta oo luminta caymiska jidadka qaarkood, khariidadaha tufaaxa ayaa ku sii hagaya.
Iyadoo lagdroid aan wali lumi lahaa Ogow sidoo kale waxaan leeyahay samsung lagdroid waana tan ugu xun ee jirta. Sure, waxaa jiri doona lagdroids ka fiican ...
Xalka dhibaatada xulashada qoraalka qaldan ee iOS
Fiidiyoow muujinaya inaan Jariid ka noqon karno Safari illaa iOS 9.3.2